Kiribati ichapokana nemaonero ako pahupenyu: Kuvhurazve Tourism muna Ndira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kiribati ichapokana nemaonero ako pahupenyu: Kuvhurazve Tourism muna Ndira
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Kiribati Breaking News • nhau • vanhu • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Iwo mamaira mazana manomwe padhuze kubva Honolulu kuenda kuRepublic yeKiribati, pane kubhururuka kuenda kuLos Angeles kana kuSan Francisco.
Kiribati ndeimwe yenyika shoma dzinozivikanwa pachitsuwa, uye chishongo chisina kubatika cheSouth Pacific Tourism.
Kiribati, zviri pamutemo iyo Republic of Kiribati, inzvimbo yakazvimirira yechitsuwa iri pakati pePacific Ocean.
Vagari vekusingaperi vanopfuura 119,000, vanopfuura hafu yavo vanogara paTarawa atoll. Nyika ine 32 maatoll uye chimwe chakasimudzwa chitsuwa chekorari, Banab
Tourism Authority yeKiribati (TAK) yatambira chiziviso nezuro na te Beretitenti, Anokudzwa Taneti Maamau pamusoro pechisarudzo chehurumende yavo kuvhura miganhu yenyika yeKiribati kubva muna Ndira 2022.
Kiribati ndeyevashanyi - avo vane shungu yekutsvaga nekutsvaga, vanhu vanofarira ruzivo kubva munzira yekushanya kunzvimbo kune vashoma vakambove, uye vanhu vanoda kunzwisisa nyika - kwete kungoiona.
Kiribati yakaziviswa muna Chikunguru, yaichengeta miganhu yayo yakavharwa.
Kiribati ichapokana nemaonero ako nezvekuti hupenyu hunofanira kunge hwakaita sei uye kukuratidza nzira isinganetsi yekurarama uko mhuri nenharaunda zvinouya pekutanga.
Inowanikwa muEquatorial Pacific Ocean, kumabvazuva kweKiribati inopa hove yepasi rose (zvese mutambo uye hove dzemabhonzo) kubva kuKiritimati Island. Kumadokero kune iyo Gilbert Group yezvitsuwa, iyo inopa zvinoshamisa uye zvakasarudzika zviitiko zvetsika.
Guta guru renyika yeTarawa rine nzvimbo dzezvakaitika kare uye zvigadzirwa zvekare apo imwe yehondo dzinoteura ropa rose paHondo Yenyika II, Hondo yeTarawa.
Kana iwe uri kushanya sechikamu chebasa rako, tinokukurudzira iwe ongorora Kiribati kuona izvi zvinofadza - South Tarawa haifanire kunge iri yega Atoll yaunoshanyira paunenge uine makumi matatu nematatu aunosarudza kubva, kunyangwe iyo North North Tarawa inopa maonero akasiyana kwazvo!
Mukuzivisa kwavo, Mutungamiri Maamau vakurudzira vanhu veKiribati vanokodzera majekiseni eECVID-19 kuti vapedze madosi avo gore risati rapera. Akasimbisa kuti kubatana uye kuteedzera zvirambidzo nemirau kwakakosha kwazvo kuchengetedzeka kweI-Kiribati yese.
Mutungamiri wenyika vakadana masangano evakuru nevakadzi, mapoka emachechi, mapoka evechidiki, masangano emadzimai, Islands Councils, nharaunda uye vanababa nanamai mudzimba dzese kuti vabatsire kukurudzira nhengo dzemhuri neshamwari kubayiwa nhomba yehutachiona hunouraya uhu.
Kubudikidza neHurongwa hweKutangazve Kwekushanya, TAK yakagadzira Kiribati Tourism & Hospitality Protocols yeNew Normal uye parizvino iri kuita COVID-19 yekuchengetedza protocol yekudzidzira kune vese vanopa pekugara.
Zvivakwa muSouth Tarawa, North Tarawa, Abaiang, Tab North uye Tab South vapedza kudzidziswa kwavo apo vamwe vese vekugara uye vanopa rubatsiro rwevashanyi mune zvimwe zvitsuwa vachazowana yavo COVID-19 protocol kudzidziswa naNovember 2021. Mukuru weTAK, Petero Manufolau akasimbisa kuti indasitiri-yakazara yekuvandudza kudzidziswa ichaitwa muna Zvita 2021, pamberi pekuvhurwa kwemuganhu muna Ndira 2022.
Sechikamu chechirongwa chayo chekutanga, TAK ichavhurawo Dhijitari Yekushambadzira Sita munaGunyana kuti ishandiswe kubva muna Gumiguru 2021, ichipa iyo Pacific Island kuenda 3 mwedzi kuti ibudise mishandirapamwe uye zvirongwa.
Vafambi vanodzoka kana kushanyira Kiribati kekutanga muna 2022 vanogona kutarisira chiitiko chakavandudzwa kuburikidza nechirongwa chekuenda kwaMauri Mark chirongwa, kuongororwa kwehotera, uye chirongwa chekubvumidzwa, uye Mauri Way, chirongwa cheKiribati National Tourism Customer Service chevapi vese vanoita zvekushanya.
Rondedzero yeKiribati's COVID-19 yekufambisa zvinodiwa uye maprotocol emusi waNdira 2022 kuvhurwa kwemuganhu wepasi rose zvichapihwa zano kana rave kuwanikwa kubva kuhurumende.